Ganacsiga iyo Dunida | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Ganacsiga iyo Dunida
May 2, 2018 Waa Maxay Ganacsi? ………Qormada 2aad
April 14, 2018 Waa Maxay Ganacsi?……….Qormada 1-aad
Waxa aan hubaa in gudaha dalka baahiyo Ganacsi oo aad u badan ey kajirto, laakiin waxaa yar dad u soojeedo arrinkaan, dad u soojeedo in ey wax cusub billaabaan, dhallinyaradu wey badanyihiin laakiin in waqtigooda ey buuxiyaan diyaar uma ahan xaqiiqdi. Haddii aad leedahay diyaar ayaan ahay waana billaabilahaa lakiin duruufo ayaa iheysto jooji walaaca faraha ba’an kugu haaya ee fiiri taariiqda dadka guulaha sameeyay halka ey soomareen. Qaarkood ayaa kaliitay halka aad adigu taagantahay maanta. 5 Fursadood oo ganacsi ayaan halkaan ku soo gudbineynaa, inkastoon anigu horay dalka aanan uga bixin oo waxa aan kahadli rabo eysan ahayn waxyaabo …
Ruja Ignatova waxay isku magacowday boqoradda lacagta labanlaabta. Waxay dadka ku nool guud ahaan caalamka u sheegeysay inay soo hindistay barnaamij lacagta lagu badiyo, iyadoo la tartameysay barnaamijka la yiraahdo Bitcoin ee lacagaha lagu shubto, waxayna dadka ka dhaadhicisay inay ku maalgashadaan balaayiin doolar. Ka dib labo ka hor, waxaa mar qura la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay. BBC-da ayaa muddo labo bilood ah baaritaan ku heysay sida ay haweeneydaas ugu suurtagashay inay khiyaanadaas lacag badan ugu dhacdo iyo meesha ay suurtagalka tahay inay ku dhuumaneyso. Horaantii bishii June ee sanadkii 2016-kii, haweeney ganacsato ah oo 36 jir …
Haween badan oo Soomaali ah ayaa nolol maalmeedka qoysaskooda kasoo saara ganacsiyo kala duwan oo ay dadaal adag ku bixiyaan, laakiin qaarkood qisooyinkooda waa kuwo cajiib ah oo soo jiita inta badan dadka. Hooyo Xaliima-sacda Macallin Cabdinuur, waa haweeney Soomaali ah oo meherad ganacsi ku leh magaalada Qabridahar ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxayna soo martay marxalado kala duwan, walina way sii wadaa howsheeda. Meheraddeeda waxaa laga cabaa shaaha iyo cabitaannada kaleba, waxayna dhaqaalaha kasoo xarooda ku maareysaa qoyskeeda baaxadda leh iyo ehellada la noolba. Ganacsigeedu hadda wuu ballaaran yahay, laakiin ma aha mid si fudud ay dhidibbada ugu aastay. “11 …
Soomaaliya waxaa kabaxa dallagyo aad ubadan kuwaasoo xaddigoodu uu kala duwan yahay. Waxaa jira nidaamyo carrada fadaraysan loogu abuuro qudrado kala duwan. Waxaad arkaysaa sawiradaan hoos kaaga muuqda marka geedka latalaalayo iyo maraaxisha ay soomaraan dalagyada la beerto. Jaantuskaan waxaa uu ku tusinayaa habab kala duwan oo isku dhafan. Dhirta qaar ayaa latalaala marka aad wax beerayso iyadoo la isticmaalayo adeega uu u baahan yahay geedka ama dallaga. Waayo dhirtu ama dalagaba waxa ay ubaahan yihiin in ay helaan bacrin. Islamrkaana ay helaan biyo, hawo iyo macaadino ku filan si ay durbadiiba u koraan oo midho dhalaan. Dhirta ama qudaarta …
Wasaaradaha Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha ayaa Dawladda Dhexe ee Soomaaliya ugu mas’uul ahaa tan iyo horaantii warshadaynta qaranka ee 1970yadii-. Waxaa la aas aasay Warshadii Hilibka ee Kismaayo iyo rugo kale oo badan oo kor u qaaday nolosha qoysas badan oo beeralay iyo xoolo dhaqato ah. Webiga Jubba iyo Shabeelle aagaga beeraha ayaa waxaa laga hirgeliyay mashaariic muhiim ah sida Mashruuca Waraabka Mogambo, Mashruuca Beeraha Bariiska Muuri ee Baardheere iyo xarumihii ADC (Agricultural Development Centers) ee Jowhar ilaa Luuq 1985-1987. Soomaalidu waxay beeraha u taqaannaa dhulka lagu beerto dalagyada loogu tala galay in laga dhigto cunto, laakiin waxaa soo galaaya …
Waxaana ka hadli doonaa sida ay ugu kala badan yihiin dalagyada la beerto soomaaliya. Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay wadamada beeraha caanka ku ah. Balse laga soo bilaabo burburkii dawladii militariga ahayd ee kacaanka 1990, ilaa hadda lajoogo. Waxaa wadanka ku dhacay masiibo aan la soo koobi Karin taasoo asiibtay deegaankii, dhirtii, noolihii, beerihii, ammaankii iwm. Waxaa iyana daba socda dad iyo duunyo badan oo ku leeday dagaaladii sokeeye ee ka socday wadanka soomaaliya ilaa 1990kii. Naflay badan sida dadka waxay u dabraaceen wadamada dariska ah iyo kuwo kale oo kabaxsan. Dadkii xirfadda ullahaa beerashada, waxna …
Baro Luuqadaha kalla duwan posted on August 6, 2015